မတ်လ 2018 | တစ်ဦးကရထား Save
လ: မတ်လ 2018
နေအိမ် > မတ်လ 2018
အားဖြင့် Yulia Egudin
စာဖတ်ချိန်:3မိနစ်များ အဘယ်ကြောင့်ဗြိတိန်ရထားစီးစျေးနှုန်းများဒါမြင့်? ဗြိတိန်ရထားစီးစျေးနှုန်းများမြင့်မားတဲ့မှထမြောက်တော်မူကြပါပြီ. ဥရောပကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံးရထားခရီးရှိသည်ဖို့စဉ်းစားသည်. ဥရောပတိုက်တွင်ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့သဟဇာတရထားခရီးလှပသောရှုခင်းဆံ့. မီးရထားခရီးသည်မှဝေးလံသောကျေးရွာများတွင်ထံမှနေရာတိုင်း access…
ရထားခရီးသွားခြင်း, ခရီးသွားလာရေးသိကောင်းစရာများရထား, ရထားခရီးသွားယူကေ, ဥရောပခရီးသွား
စာဖတ်ချိန်:5မိနစ်များ သငျသညျခရီးသှားဖို့ဘယ်လိုဆုံးဖြတ်တဲ့အခါသင်ရွေးချယ်စရာဝန်တို. နာမည်ကျော်ရုပ်ရှင်၏အမည်လိုပဲ, သငျသညျလေယာဉ်ကနေတဆင့်သွားနိုင်ပါတယ်, ရထား, နှင့်မော်တော်ကား. ဘယ်အချိန်မှာကအီတလီ၏အလှည့်လည်တာမှကြွလာ, သို့သော် – အားဖြင့်သွားအချို့တိအခွင့်အရေးရှိပါတယ်…
အားဖြင့် Udi အဘိဓါန်ခန္ဓာကိုယ်
စာဖတ်ချိန်:3မိနစ်များ ရထားဥရောပခရီးသွားလာအလှဆုံးတစ်ခုဖြစ်သည်, ဇါတ်စင်နှင့်ဆိုင်သော, နှင့်ကမ္ဘာအတွက်ယဉ်ကျေးမှုခရီး. သငျသညျအမ်စတာဒမ်မီးရထားမှသစ်ကိုဗြိတိန်နိုင်ငံလန်ဒန်မြို့တူသောအဓိကဥရောပမြို့ကြီးများအကြားတိုက်ရိုက်ရထားရှာနေကြပါသည်သို့မဟုတ်သင်ရင်ခုန်စရာရထားခရီးရှာနေရှိမရှိ, ဥရောပရထား…
စာဖတ်ချိန်:4မိနစ်များ အတော်များများကကမ်းခြေအားလပ်ရက်စိတ်ဖိစီးမှုပျံသန်းမှုနှင့်အတူစတင်, ဘတ်စ်ကား, နှင့်ကူးတို့, ဒါပေမယ့်တစ်ဦးပိုမိုလွယ်ကူစွာလမ်းရှိပါတယ်. မီးရထားနဲ့ခရီးသွားကြဤမျှလောက်များစွာသောအကျိုးကျေးဇူးများကိုရှိပါတယ်, သင်သည်သင်၏အားလပ်ရက်ပင်စတင်ဖွင့်ရှေ့တော်၌ကိုယ်စိတ်အေးလက်အေးခံစားထွက်ခွာ. သင်သည်သမုဒ္ဒရာတစ်ဦးအမြင်နှင့်အတူတစ်အရသာမုန့်ညက်ရှာနေရှိမရှိသို့မဟုတ်…
ပြင်သစ်ခရီးသွားရထား, ရထား Travel အီတလီ, ပေါ်တူဂီရထားခရီးသွားလာ, ရထားခရီးသွားစပိန်, ဥရောပခရီးသွား
စာဖတ်ချိန်:4မိနစ်များ အီတလီနိုင်ငံပွဲတစ်ပွဲကိုမြေကြီးပေါ်မှာအကြီးမြတ်ဆုံးကော်ဖီယဉ်ကျေးမှုရှိပါတယ်. အဲဂုတ္တုပြည်ကော်ဖီတင်သွင်းဖို့ပထမဦးဆုံးဥရောပတိုင်းပြည်, အီတလီနိုင်ငံ 16 ရာစုကတည်းကအောင်မြင်သောကဖေးရှိခဲ့ပါတယ်, ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့သင်တို့အပေါ်မှာအကြံပေးပါလိမ့်မယ်5အီတလီမှာရထားဘူတာအနီးအံ့သြဖွယ်ကော်ဖီဆိုင်များ. ဤဆောင်ပါး…
အီစတာသည်ရထားဖြင့်ဗင်းနစ်ရန် Get လုပ်နည်း
အားဖြင့် Niamh ရေ
စာဖတ်ချိန်:3မိနစ်များ ဗင်းနစ်အီတလီမှာအများဆုံးဖှယျနှင့်မှော်မြို့တသည်နှင့်ရထားအလွယ်တကူဖြစ်ပါသည်. အီစတာအားလပ်ရက်ကာလအတွင်းဗင်းနစ်သွားရောက်လည်ပတ်ခြင်းအားဖြင့်, သငျသညျသာယာသောနွေဦးရာသီဥတုကခံစားနိုငျ. ဒါဟာသင်အိမ်ပြင်တနေ့လုံးဖြုန်းဖို့ခွင့်ပြု. သမိုင်းဝင်စင်တာမှခရီးသွား…
စာဖတ်ချိန်:4မိနစ်များ ဥရောပရထားစွန့်စားမှုအပေါ်စတင်နေဖြင့်ကြည့်ရှုပါနှင့်ဤမျှလောက်ပိုပြီးအတွေ့အကြုံ. ဥရောပ၌မီးရထားနဲ့ခရီးသွားကြဥရောပနိုင်ငံတွေကိုခရီးလှများအတွက် quintessential နည်းလမ်းနှင့်မျှနက်နဲသောအရာကိုအဘယ်ကြောင့်ဖြစ်ပါသည်. ခရီးသွားများအတွက်မျိုးစုံနိုင်ငံများနှင့်ယဉ်ကျေးမှုအောင်နိုင်နိုင်အောင်အဆိုပါရထားလမ်းကွန်ယက်ကိုအလွန်အမင်းဖွံ့ဖြိုးပြီးဖြစ်ပါတယ်…
ရထား Featuring အကောင်းဆုံးရုပ်ရှင်ရုပ်ရှင်
စာဖတ်ချိန်:5မိနစ်များ အဘယ်အရာကိုပိုပြီးရထား Featuring အနေနဲ့စိတ်လှုပ်ရှားစရာ, Movies စောင့်ကြည့်ထက်ရထားခရီးစဉ်ကိုယူသငျသညျလာအောင်နှိုးဆွပါလိမ့်မယ်? ရထား Featuring အကောင်းဆုံးရုပ်ရှင်ရုပ်ရှင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စာရင်းမှာကြည့်လိုက်ပါ, and tweet us at @saveatrain and tell us which ones you have seen and if you loved…
Highspeed ရထားဖြင့်ရောမမှ Paris သို့သွားပါ
စာဖတ်ချိန်:3မိနစ်များ ပဲရစ်စ်နှင့်ရောမမြို့နီးပါးတိုင်းခရီးသွားမယ့်ရေပုံးစာရင်း၏ထိပ်မှာရှိပါတယ်. ဤရွေ့ကားအံ့မခန်းမြို့ကြီးများမိမိတို့၏ယဉ်ကျေးမှုအဘို့အလူကြိုက်များ, ကမ္ဘာ့အတန်းအစားအစားအစာ, လက်ရာမြောက်သောဗိသုကာနှင့်ဤမျှလောက်ပိုပြီး. ရောမမြို့နှင့်ပဲရစ်ဝေးဆိတ်ကွယ်ရာများမှာနေစဉ်, သူတို့ကောင်းကောင်းရထားချိတ်ဆက်ထား. ဆိုလိုတာက…
ပြင်သစ်ခရီးသွားရထား, ရထား Travel အီတလီ, ခရီးသွားလာရေးသိကောင်းစရာများရထား